Accueil > Gazetin'ny nosy > Depiote G-5: Esory ny ministra sy ny Dg tsy mahavita azy
Depiote G-5: Esory ny ministra sy ny Dg tsy mahavita azy
Nanao valandresaka hoan’ny mpanao gazety ny ny depiote izay mivondrona amin’ny anarana hoe G-5, omaly alatsinainy faha 08 janoary 2018 tamin’ny 3 ora tolakandro tetsy amin’ny Hotel Colbert Antaninarenina. Nahitana ny depiote Randrianasolo Nicolas avy any Betroka, Razafimahatratra Abel avy any Manakara, Cathy avy any Mananjary, Raherisoa Vololona Victorine avy eto Ambohimanarina Antananarivo ary ny depiote Hanitriniaina Mamy Armand avy any Miandrivazo.
Ny depiote G-5 dia milaza fa mpanohana ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ary nanao izaynahalany azy tamin’ny fifidianana izay ho filoham-pirenena tamin’ny taona 2013 iny.
Be dia be ny zavatra tsy mandeha eto amin’ny firenena hoy ingahy depiote Nicolas Randrianasolo amin’izao fotoana izao noho ny ataon’ny mpikambana maromaro ao amin’ny governemanta. Noho izany dia voatery ny G-5 tsy maintsy miteny ny zavatra tsy mahomby ataon’ireo olona ireo satria mamitaka ny filoham-pirenena. Tsy ny minisitra ihany no tokony ho esorina amin’ny toerana ary soloina olona hafa fa be dia be ny tale jeneraly na ny DG sy ny tale ary ny lehiben’ny sampan-draharaham-panjakana isan-karazany no tsy manao ny asany ara-dalàna intsony.
Nambaran’ny depiote Raherisoa Vololona Victorine koa fa maro ny minisitra no tsy manaraka ny fampiharana ny programanasan’ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra, ary tsy miteny akory ny anaran’ny filoham-pirenena mihitsy aza fa manao izay saimpatany fotsiny ihany. Hoan’ingahy Nicolas Randrianasolo dia nolazainy tamin’izany ny minisitra Onitiana Réaly izay miadidy ny mponina. Miisa 10 mahery izy ireo no tsy mamely hoy izy ka tokony hiala fa manimba zavatra maro. Nandefa hafatra manokana hoan’ny filohan’ny sendikan ny mpitsara Malagasy (SMM) ramatoa Fanirisoa Herinaivo ity depioten’i Betroka ity fa aoka hono ity ramatoa ity rehefa hanao politika dia hijoro mitovy aminy fa tsy hampifangaro ny asany sendika sy ny fomba fijery politika toa io ataony io. Nahoana hoy izy no tsy asiany teny ny mahakasika ny fitsarana ao Betroka izay nahatratra olona nitondra basy nefa tsy nogadraina, ary misy olona hafa koa izay efa nahazo famonjana nefa avela hiriaria fotsiny?
Ny depiote Cathy avy any Mananjary indray dia nanambara fa mijaly sy mahantra ny vahoaka Malagasy noho izany dia tsy maintsy arahina maso akaiky ny fomba fiasan’ny governemanta.
Ny depiote Razafimahatratra Abel avy any Manakara indray dia nampita hafatra hoan’ingahy Ravalomanana Marc izay lazainy fa tokony hitondra fanazavana amin’ny vola nangalariny tao amin’ny banky foiben’i Madagasikara tamin’ny toerana maro manerana an’i Madagasikara talohan’ny nandosirany teto Madagasikara tamin’ny taona 2009 iny. Toa izany koa ny fanagadrany mpanao politika sy olona tsotra noho ny firehany tsy nitovy tamin’ny antoko TIM (Tiako I Madagasikara) izay miisa 1686 tamin’ny taona 2001-2002. Nambarany fa tsy ilaina intsony ny olona toa ireny hitondra ny firenena. Mbola nampiany hoe mpanavakavaka ara-poko sy aram-pirazanana koa ity filoha teo aloha ity.
Ny depiote Hanitriniaina Mamy Armand avy any Miandrivazo indray dia nanambara fa ilaina ny hanitsiana ny lalàm-panorenana satria niteraka disadisa izany ka rariny sy hitsiny hoy izy.
Izy zehetra ireo dia samy nilaza fa mangataka ny hilatsahan’ny filoham-pirenena indray amin’ny fifidianana amin’ny 2018.
Miditra tanteraka ao anatin’ny vanim-potoanan’ny fifidianana isika eto Madagasikara amin’izao fotoana izao. Manomboka mafana ny raharaham-pirenena. Manomboka izao dia hilaza ny fomba fahitany ny fahatsaran’ny fitondrana Hery Rajaonarimampianina ny mpomba azy sy ireo nahazo tombotsoa taminy. Ny olona mahita faisana izay milaza fa tsy izy intsony izao fitondrana izao dia tsy maintsy hilaza ny heviny koa. Hipoitra avokoa hatramin’ny nafenina ity raharaha ity ka ho tsy hifampitsitsy intsony ny roa tonta. Izay indray izany no rivotra hiainana manomboka izao. Mampanahy ny raharaha satria nahitana taratra zavatra maro ny fihetsika ara-politika nitranga hatramin’ny voalohan’ny taona izay. Ny kabary ny filoham-pirenena tamin’ny 05 janoary 2018 iny nandiso fanantenana ny vahoaka maro eny na dia ny mpiasam-panjakana fotsiny ihany aza, izay notapahina karama sy tsy nasondrotra toa ny fanao isan-taona izany noho ny fidangan’ny vidim-piainana. Ny fandroahan’ny olona tany Toliara an’ingahy Ravalomanana Marc tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo, ka hanaovany fanambarana androany amin’ny alalan’ny fihaonana amin’ny mpanao gazety.
Manomboka hafana ny raharaha politika ka ho hitan-tsika ny tohiny. Hanomboka ny fanehoan-kevitra maro samy hafa manomboka izao. Koa mahaiza mandinika amin’izay ry Malagasy!